नवलपरासीमा चलिरहेको ट्रकमाथि ‘पेट्रोल बम’ प्रहार ! देशैभर विप्लवको यस्तो आतंक…..::Leading Nepal News
नवलपरासीमा चलिरहेको ट्रकमाथि ‘पेट्रोल बम’ प्रहार ! देशैभर विप्लवको यस्तो आतंक…..
जेठ १३, नवलपरासी । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले सोमवार आह्वान गरेको नेपाल बन्दका कारण काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा बम फेला परेको छ भने विभिन्न ठाउँमा मालबाहक ट्रक, जीप, बस आदि जलाइएको भेटिएको छ । ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्ताले सोमवार बिहान ३ बजे एक ट्रकमा पेट्रोल बम प्रहार गरी आगजनी गरेका छन् ।नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका–११ स्थित राजमार्गमा सिमेन्ट बोकेर नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको लु२ख १०८ नम्बरको ट्रकमा सो समूहले पेट्रोल बम प्रहार गरी आगजनी गरेका हुन् ।
पेट्रोल बम प्रहार गर्दा ट्रक अनियन्त्रित भई सडकबाट पाँच मिटर तल खसेको थियो । ट्रक चालक तनहुँ ब्यास नगरपालिका–४ बस्ने ३३ वर्षीय अमर विक घाइते भएका छन् ।उनको ढाड र अनुहारमा आगोले पोलेको छ । घाइते विकको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।यस्तै आज बिहान ३ः३० बजेको समयमा कावासोती नगरपालिका–१६, स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बा ३ च ९३ नम्बरको जीपमा पेट्रोल बम प्रहार गर्दा जीपमा सामान्य क्षति भएको छ । मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ । नवलपरासीकै बुलिङटार गाउँपालिकामा विस्फोटका लागि खेतमा राखिएको सिलिण्डर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।खेतमा सिलिण्डर राखी आगो लगाएको अवस्थामा सिलिण्डर पड्किनुअघि नै प्रहरीले सो सिलिण्डर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले बताएको छ ।
मकवानपुरमा पनि दुई ट्रकमा आगजनी
बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दमा मकवानपुरमा दुई सवारीसाधनमा आगजनी गरिएको छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौंडा १ चौकिटोलमा ना ७ ख ९४९३ नम्बरको मिनी ट्रकमा आगजनी गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले बताएको छ । चौकीटोलस्थित प्रहरी चौकी नजिकै गएराती करिब एक बजे रोकिराखेको ट्रकमा आगजनी गरिएको थियो । आगजनीबाट गाडीको सबै भाग जलेको छ। त्यस्तै मकवानपुरको उत्तरी थाहा नगरपालिका वडा नम्बर १ खानीगाउँमा ना ६ ख ८००७ नम्बरको आईचर गाडी जलाइएको अवस्थामा फेला परेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार बिहान करिब ४ बजेको समयमा आगजनी भएको प्रहरीले बताएको छ ।
‘विप्लव’ समुहले पूर्वी सुर्खेतमा एक यात्रुवाहक बसमा आगजनी गरेका छन्। गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ को गुमीबाट छिन्चु आउँदै गरेको ना २ ख ७४४४ नम्बरको बसलाई विप्लवका कार्यकर्ताले सोमबार बिहान गोचेखोलामा आगजनी गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार हतियारसहित आएका विप्लवका कार्यकर्ताले चालक, सहचालक र बसधनीलाई झारेर पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेका थिए ।आगजनीबाट बस पूर्णरुपमा क्षति भएको छ ।
नगरपालिकाको कार्यालयमै बम बिस्फोट
सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका कार्यलयमा बम विस्फोट गराइएको छ । हरिपुर नगरपालिका–२ मा रहेको नगरपालिका कार्यालयमा आइतबार राति अज्ञात समूहले बम विस्फोट गराएको प्रहरीले जनाएको छ । बम स्फिोटबाट कार्यालयमा क्षति पुगेको छ ।बम स्फिोटबाट कार्यालयको झ्यालको सिसा फुट्नुकासाथै पूर्वपट्टिको पर्खालमा क्षति पुगेको छ ।